पोखरा बाघमारामा तीज महोत्सव तथा स्व. रबिन्द्र स्मृति पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु - Gandak News
पोखरा बाघमारामा तीज महोत्सव तथा स्व. रबिन्द्र स्मृति पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु
गण्डकन्यूज द्वारा १५ भाद्र २०७६, आईतवार १३:१४ मा प्रकाशित
पोखरा ३३ बाघमारामा तीज महोत्सव शनिबारदेखि सुरु भएको छ । बागमारा युवा संगम समूहको आयोजनामा महोत्सव सहित भलिबल प्रतियोगिता आयोजना भएको हो ।
हिन्दू नारीहरुको महान चाड तीजको अवसरमा महोत्सव सँगै स्व. रबिन्द्र अधिकारीको स्मृतिमा पुरुष भलिबल समेत आयोजना गरिएको आयोजकले स्पष्ट पारेको छ । शनिबार एक समारोहका बीच गण्डकी प्रदेश सांसद तथा नेकपा कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापाले उद्घाटन गरे । कार्यक्रम भदौ १६ गतेसम्म चल्नेछ ।
प्रतियोगितामा १२ टिमको सहभागीता रहेको खेलमा प्रथम हुनेले २० हजार नगद प्राप्त गर्नेछन् । महोत्सवमा तीज गित प्रतियोगितासँगै घैटो फुटाउने, डोरी तान्ने, छेलो हान्ने खेल पनि समावेश गरिएको छ । तीज गित प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले १५ हजार नगद गर्नेछन् । अन्य खेलका विजेतालाई पनि नगदसँगै विविध पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले बताए ।